अनमोलसँग नायिकाहरु किन हुन्छन् क्रेजी ? – ejhajhalko.com
अनमोलसँग नायिकाहरु किन हुन्छन् क्रेजी ?
२६ माघ २०७४, शुक्रबार ०३:१९ 374 पटक हेरिएको
‘आकर्षक व्यक्तित्वका कारण अनमोल बढी ह्यान्डसम मानिएका हुन् । उनको लुक्सका कारणले नै मुख्यतः युवतीहरु उनीप्रति क्रेजी भएको हो जस्तो लाग्छ । अग्लो कद, कोरियन लुक्स र राम्रो ड्रेसअप सेन्स अनमोलमा जतिको अरुमा कमै छ । व्यक्तिगत रुपमा मलाई अनमोल सबैलाई सम्मान गर्ने र कडा मिहिनेत गर्ने मान्छे लाग्छ । -बेनिशा हमाल
आजको कान्तिपुर(कोशेली)मा यो खबर छापिएको छ ।